69er Health Care Fund – HlaMin
69er Health Care Fund
By Hla Min (Lifelong Learner) on December 4, 2021 • ( Leaveacomment )
Update : December 4, 2021
Great Job by U Aung Min (Chair, 69er HCF)
He visited the families of 69ers who are GBNF.
ဒီနေ့ (၄/၁၂/၂၀၂၁)တွင် လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ်က ကွယ်လွန်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သော သူငယ်ချင်းအချို့ / ဇနီး များတို့ထံသို့ သတင်းမေး ခြင်း အလှူငွေပေးအပ်ခြင်း များဆောင်ရွက်နိုင်ရန်သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ Abdul Rauf (E), Ko Chit Phay (M), Ko Tun (Met), Ko Khin Maung Gyi (M), Ko Aung Gyi Shwe (E) နှင့် ဇနီးကွယ်လွန်ခဲ့သော Ko Aye Thein တို့ထံရောက်ခဲ့ပါသည်။ကိုချစ်ဖေ​၏ဇနီးမှ HCF မှပါဝင်လှူဒါန်းသောနာရေးအလှူ ငွေကျပ် တစ်သိန်းအား HCF သို့ပြန်လည်ပေးလှူခဲ့ပါသည်။နာရေးကိစ္စများပေါ်ပေါက်ခဲ့သောအခြားသူငယ်ချင်းများထံသို့လည်းကြိုးစားထိတွေ့သွားပါမည်။HCF သို့ အလှူငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသောသူငယ်ချင်းများအားလုံး​၏စေတနာများကိုလည်းကာယကံရှင်များမှ အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိနေပါကြောင်းကြားသိခဲ့ရပါသည်။ယနေ့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များအားမှတ်တမ်းပုံရိပ်များဖြင့်ပူးတွဲဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။
Abdul Rauf (U Tin Aye, E)
#26, 89th St. G Fl., Mingalar Taung Nyunt
U Aung Gyi Shwe (E)
ဧရာချမ်းသာ Condo သာကေတ
U Chit Pe (M)
#51, 5th Fl, Mandalay St., Mingalar Taung Nyunt.
U Khin Maung Gyi (M)
#128, 41st, 4th Floor
U Tun (Met)
Maung Wait Condo4th Fl,Upper Pansodan St.
U Aye Thein (E)
ကွယ်လွန်သူ ကိုအောင်မြင့် (ရေနံ)အားရည်စူးလျက် စွန်းလွန်းဂူ ဝိပဿနာကျောင်းတိုက်တွင်HCF မှ ဝထ္ထုငွေ ကျပ် တစ်သိန်းအား၎င်း​၏မိသားစုဆန္ဒခံယူလျက် အများကိုယ်စားသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။တိုက်ဆိုင်စွာဖြင့်ယနေ့ (၂/၁၂/၂၁)သည် သူကွယ်လွန်သည့် သုံးလပြည့်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ အခြားကွယ်လွန်သူ သူငယ်ချင်းများ အတွက်လည်း ဆက်လက်လှူဒါန်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့်လှူဒါန်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များအချိန် နှင့်တပြေးညီမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်များအတွက်တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
U Aung Myint (Pet)
Dear friends of RIT69ers
ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်သော သူငယ်ချင်း ကိုသိမ်းဆွေ GBNF 103 EP69 (28/7/2021)အားရည်စူးလျက် ယနေ့ (၃/၁၂/၂၀၂၁)တွင် စွန်းလွန်းဝိပဿနာကျောင်းတိုက် တွင် ဆွမ်းပဒေသာပင် အလှူတော်အတွက် ငွေကျပ် ၁၀၀၀၀၀/ အားမိသားစု ဆန္ဒနှင့် အညီ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ကိုသိမ်းဆွေသည် ရောက်ရှိရာ ဘုံဘဝမှ ဤစုပေါင်းဒါနအား သာဓုခေါ်နိုင် ပါရန်နှင့်အများ သိရှိ ဝမ်းမြောက်ကြစေရန်မျှဝေအပ်ပါသည်။
U Thein Swe (E)
115 (aboutaThird of the 69ers) have passed away.
Some 69ers (e.g U Aye Thein) lost their spouses.
Some 69ers have medical conditions.
the 30th Anniversary (in 1999),
the 40th Anniversary (in 2009),
Golden Jubilee of Admission (in 2014),
True Golden Jubilee of Graduation (in 2019).
Some are looking forward to the resumption of
Monthly Breakfast Gatherings,
Annual Dinner & Entertainment
and 55th Anniversary (and beyond).
for the 69er activities.
Tekkatho Moe War (23)